Nepali Rajneeti | राजा विरेन्द्र मर्नुअघि जोगीले गरेका थिए भविष्यवाणि, हेरौँ समग्र कथा
जेठ २०, २०७८ बिहिबार ५२२ पटक हेरिएको
जोगीले भने, ‘देखिए, दो हप्ते के अन्दर शुक्रवारके दिन दरवारके लोग मा रे जा रहे है । देखिए इस वक्त आपके चाचा प्रधानमन्त्री है । उनके उपर भी बडा ए ट्या क होनेवाला है । लेकिन मत घ बरा इए, उनको कुछ नहीँ होगा । सिट छो ड्नी होगी । उसके वाद और दश साल जिएंगे वह ।”
दरवार ह त्या का ण्ड भएको पनि वीस वर्ष भयो । तर अझै यो घटना र ह स्य मै छ । विवाहको विषयलाई लिएर वि वा द भएपछि युवराज दिपेन्द्रले राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, सहित राजपरिवारका सदस्यहरु माथि गो ली चलाएर ह त्या गरेको भनिएको छ । तर घ ट ना वारे निष्पक्ष अ नु सन्धा न नभएका कारण धेरै नेपाली अझै पनि यो कुरा पत्याउन तयार छैनन् । ह त्या का ण्ड अघि नै दरवारमा ठूलो दु र्घ टना हुन सक्ने भविश्यवाणी एक जोगीले गरेको तथ्य एक अनाईन पत्रिका अन्वेषणले फेला परेको छ । यो आलेख यही विषयमा केन्द्रीत हुने छ ।
विसं २०५८ जेठ पहिलो साताको कुरा हो । बीपी पुत्र श्रीहर्ष कोइराला बालुवाटरस्थित कार्यालयमा व्यस्त थिए । खत्री थरका एक व्यवसायी ह स्या ङफ स्या ङ गर्दै आइपुगे । तिनताका श्रीहर्षका काका गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए भने उनी आफैँ पनि कृषि विकास बैंकका सल्लाहकार । कृषि र कुखुराको दाना उत्पादन गर्ने व्यवसायी कल्याण खत्रीले भने, ‘श्रीहर्षजी व्यवसायमा मलाई धेरै नो क्सा नी भयो, कृषि विकास बैंकमा अलिकति ऋण छ मि ना ह गराई दिनुपयो ।’ श्रीहर्ष भन्दै थिए, ‘यार मैले कसरी मि ना ह गर्न सक्छु ? धेरै कर गरेपछि उनले खत्रीलाई भनिदिए ‘ठीक छ निवेदन हाल्नुस् के गर्न सकिन्छ म प्रयास गर्छु ।’ श्रीहर्षबाट आफ्नो काम नहुने बुझेपछि खत्री भन्न थाले, ‘ठीक छ मेरो काम त गरिदिनु भएन । ऋणले म थ ला परेँ । तपाइँले सुन्नु भएन । त्यसो भए भारतबाट एकजना ना मु द जोगी आएका छन्, भविष्यवाणी गर्न माहिर । एक एक कुरा मिलाउँछन् । तपाईँलाई भेट्ने भन्दैछन् । समय मिलाउनुस्, मसँग हिँड्नुस्, भेटाउँछु ।’’
श्रीहर्षले भने, ‘कता जोगी भेट्न जाने यार म परेँ आईटीको मान्छे । ज्योतिषीमा विश्वास छैन । किन भेट्नु ।’’ मनमनै उनी सोच्न थाले ‘कतै ज्योतिष भेटाउने बहानामा आफ्नो ऋण मि ना ह गर्न मलाई प्रभावित गर्ने र णनी ति त होइन ।’’ खत्रीले धेरै कर गरेपछि श्रीहर्ष जोगी भेट्न राजी भए । त्यो घ टना बारे श्रीहर्षले लेखकलाई सुनाए, ‘उसले धेरै कर गरेपछि मैले हुन्न भन्नै सकिन ।’ कल्याणले श्रीहर्षलाई सरासर बालाजु औद्योगिक क्षेत्र नजिकै आफ्नो घरमा पुयाए । दक्षिण भारतबाट आएका जोगीसँग उनको त्यहीँ भेट भयो । श्रीहर्षलाई भेट्नासाथ जोगीले भने, ‘ देखिए, दो हप्ते के अन्दर शुक्रवारके दिन दरवारके लोग मा रे जा रहे है । देखिए इस वक्त आपके चाचा प्रधानमन्त्री है । उनके उपर भी ब डा ए ट्या क होनेवाला है । लेकिन मत घ बरा इए, उनको कुछ नहीँ होगा । सिट छो ड्नी होगी । उसके वाद और दस साल जिएंगे वह ।”
श्रीहर्षले लेखकलाई सुनाए, ‘मलाई उसको भनाइमा खासै विश्वास लागेन । त्यति ग म्भी रता पूर्वक लिइन पनि । सानो बुबा अझै दस वर्ष बाँच्नुहुन्छ भन्यो । मेरो अनुहारमा एकोहोेरो हेरेर जोगीले भन्यो, ‘आप को अभि भी विश्वास नही हो रही है न ।’ श्रीहर्ष चुपचाप बसिरहेका थिए । जोगीले झोलाबाट रातो रंग मिसिएको एक मुठी चामल निकाल्यो । मन्त्र गु नगुना उँदै सोध्यो, ‘तपाइँको घरमा परेवा आउँछन्’ श्रीहर्ष: आएको त थाहा छैन जोगी : हो मैले भनेको सत्य हो होइन, तपाईँले थाहा पाइहाल्नु हुनेछ । अब हेर्नुहोला । तपाईँको घरमा १३ वटा परेवा आउनेछन् । घरमा परेवा जति बढ्ने छन् तपाइँको त्यति नै उन्नति हुनेछ । श्रीहर्ष : छक्क पर्दै (मनमनै)अब के उन्नति, कस्तो उन्नतिको कुरा गरेको होला ? मैले कुनै ला भको पद पाउने हो कि ? पैसा कमाउने हो कि ?
जोगी: ठीक छ । घर जानू । मैले भनेको कुरामा ध्यान दिनू । तपाईँको देशमा ठूलो दु र्घट ना हुनेवाला छ । आफ्नो काका (प्रधानमन्त्री) लाई ए ल र्ट गराउनु होला ।
कुराकानी चलिरहँदा खत्री बा थरुम तिर लागे । जोगी ब र्वरा उँदै भन्न थाले ‘यो कल्याणको पनि धेरै दिन छैन, अब अरु केही महिनाभन्दा बढी बाँ च्दैन ।’ उसको कुरा सुनेर श्रीहर्ष छ क्क परे । लाग्यो ‘ल जसको घरमा बसेको छ, उसैलाई बाँ च्दैन पो भन्छ बा ?’ त्यसपछि श्रीहर्षले जोगीलाई सोधे, ‘हैन तपाइँलाई सबै कुरा थाहा छ भने आफैँ राजा र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यो सबै कुरा किन भन्न सक्नुहुन्न ? जोगी: राजा वीरेन्द्रले बोलाएरै त आएको हुँ । बेङलोरबाट । नत्र म जं गल मा बस्ने जोगी अहिले नेपाल किन आउथेँ । रानी ऐश्वर्यले निक्कै कर गरेपछि राजाले मलाई बोलाउन लगाएका हुन् युवराज दीपेन्द्र र उनकी प्रेमिकाबीच विवाह सम्भव छ कि छैन भनेर सोध्नलाई ।
जोगी भन्दै थि, ‘राजालाई म कसरी भनू कि तिमी मा रिँ दै छौ । तर, मैले उनलाई भनेको छु । सरकार पा र्टी स रिक नहुनु होला र दरवारमा पनि कुनै पा र्टी नराख्नु होला ।’’ ज्योतिष विद्यामा विश्वास नभएका कारण श्रीहर्षले त्यो दिनको घटनाबारे कसैसँग कुरा गरेनन् । पत्नी रुचिरालाई मात्र जोगीले भनेको कुरा सुनाए ।
यस प्रसंगमा २०७२ साल साउन १५ मा श्रीहर्षले लेखकलाई सुनाए, ‘घर फर्किएपछि पत्नीलाई मात्र उसको भविष्यवाणी सुनाएँ । गिरिजाबाबुलाई भन्न सकिनँ । कस्तो बौ ला हासँग संगत गर्दो रहेछ भनिदिनु होला भन्ने ड रले । उसलाई भेटेको भोलिपल्टदेखि घरमा परेवा देखा परे । त्यसअघि कहिल्लै मेरो घरमा परेवा देखिएका थिएनन् । रुचिराले जोगीले पठाएको अ क्ष ता परेवालाई दिन भनिन् ता कि तिनको संख्या गन्न सकियोस् ।’’ जोगीले भनेबमोजिम घरमा परेवाको हुल आउन थालेपछि एकाबिहानै श्रीहर्ष बालुवाटारतिर लागे । रि सा ए रि सा उनुहुन्छ काका (प्रधानमन्त्री) सबै कुरा सुनाउँछु भनेर । त्यो दिन प्रधानमन्त्री कोइराला निवासबाट बाहिरिइ सकेका थिए । भेट हुन सकेन । देशको प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता हुने नै भयो । फेरि कुनै बेला भेट भयो भने भनौँला, भन्दै फर्किए उनी ।
केहीदिन श्रीहर्षले काकालाई भेट्न पाएनन् । विसं २०५८ जेठ १९ गते शुक्रबार राति प्रेम उपाध्यायले आ त्ति एर फोन गरे, ‘दरवारमा गो ली चल्यो रे को को म रे . राजारानी म रे भन्छन् ।’’ राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्वअध्यक्ष विश्ववन्धु थापाका नातेदार प्रेमको भनाइमा पत्यार लागेन । श्रीहर्षले भनिदिए ‘‘तिमी बौ ला यौ कि क्या हो ? यो राति खाएर नचाहिने कुरा गर्ने हो ?’’ प्रेम भन्दै थिए ‘साँच्चै हो दरबारमा ठूलो घ ट ना भएको छ । तपाईँ पत्ता लगाउनुस् ।’’ श्रीहर्षको दिमाग फ न्फ नी घुम्न थाल्यो । त्यो जोगीको भविष्यवाणी र उसको हा उभा उ चलचित्रको रि लजस्तै फ नफ नी घुमिरहेको थियो । उनले सीधै बालुवाटारमा फोन लगाए । अनि थाहा भयो, ‘दरवारमा ठूलो का ण्ड भयो । प्रधानमन्त्रीज्यू दरवारका प्रमुख सचिव पशुपतिभक्त महर्जनका साथ निस्कनु भयो ।’’
बस ! श्रीहर्षको दिमाग बिजुलीको गतिमा घुम्न थाल्यो । आँखामा उही जोगीको अनुहार र भविष्यवाणीमात्र आइरह्यो । शुक्रवार नै दरवारका मान्छे मा रि न्छन् भनेको थियो । त्यही भयो । श्रीहर्ष सीधै बालुवाटार पुगे । काकालाई भेट्न पाएनन् । फर्किए । मनमा लागिरह्यो, उसले सानोबुवामाथि ठूलो ह म ला हुनेछ भनेको छ । के होला कसो होला ? रातभर झि मि क्क नसुतेर बि त्यो । जेठ २० गते बिहान मात्र थाहा भयो । जेठ १९ गते शुक्रवार दरवारमा भएको गो ली का ण्डमा राजा रानीसहित दश जनाको मृ त्यु भयो । युवराज दीपेन्द्रको समेत मृ त्यु भइसकेको थियो । कृ त्रि म श्वास प्रश्वास दिएर राखिएको थियो उनलाई ।
उनै अचेत दीपेन्द्रलाई राजा घोषणा गरियो, अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रलाई राज्य सहायक बनाइयो । नयाँ राजा घोषणा गरिए पनि दीपेन्द्रको राज्यारोहण भएन । राजा कहिल्यै म र्दै न भन्ने परम्पराअनुसार राजाको स्व र्गारो हण हुँदा नयाँ राजाको राज्यारोहणपछि मात्र दा हसं स्का र गर्ने प्रचलन थियो । तर नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक त्यो परम्परा भं ग भयो । जेठ २० गते अपराह्न ४ बजे राजारानीको श व यात्रा सुरु भयो छाउनी अस्पतालबाट । राजारानीको श वको ठीकपछि राज्य सहायक ज्ञानेन्द्र, अनि प्रधानमन्त्रीको मोटर थियो । तिनताका प्रधानमन्त्री कोइरालाको चर्को आ लो चना भइरहेको थियो । संसद् र सडकमा मात्र होइन आफ्नै पार्टीभित्र पनि संस्थापक नेता भट्टराईले समेत पद छो ड्न द बा ब दिइरहेका थिए । श व यात्रा स्वयम्भु नजिक पुग्दा च र्को ना रावा जी सुरु भयो ।
मानिसको भि डले सडकमा खुट्टा राख्ने ठाउँसम्म थिएन । राजा वीरेन्द्रका एडीसी सुन्दरप्रताप राना लेख्छन्, ‘श व यात्रा चलाएपछि प्रधानमन्त्रीलाई लक्ष्य गरी भ या नक ह मा ला भयो । बाटोको छेउमा निर्माणाधीन एक चार तले घरमाथिबाट प्रधानमन्त्री चढेको मोटरमा चार पाँच किलोको ढुं गा फा लि यो । प्रधानमन्त्री वा लवा ल ब चे । तर, छत क च्या ककु चु क्क भयो । सुरक्षाकर्मी समेत ज्यान जो गाउ न भा ग्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । स्थिति का बु बाहिर पुग्यो । मोटरमा प्रधानमन्त्री, अंगर क्षक र ड्राइभर थिए । प्रधानमन्त्री बोलेका थिएनन् । अं गरक्ष क र ड्राइभरले मनमनै सोचे यति नै रहेछ म रि ने नै भइयो । मोटरको अघिल्लो सिटमा रहेका अं गरक्ष क सुनील श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीसँगै पछिल्लो सिटमा बसे । सुरक्षाका लागि प्रधानमन्त्रीसहित तीनैलाई हे लमे ट लगाइयो । लगातार ढुं गामु ढा भैरहेको थियो । वु लेट प्रु फ मोटरको सिसा प त्रप त्र हुँदै पूरै फु ट्यो । प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका लागि प्रहरी महानिरीक्षक प्रदीपशमशेर राणा आफैँ प्रधानमन्त्रीको मोटरको अघिल्लो सिटमा (अं गरक्ष क बस्ने) बसे ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाविरुद्व ना रावा जी गर्दै ढुं गा प्र हा र हुन थालेपछि अ सुर क्षा महसुस गरेर गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेलसहित अधिकांश मन्त्रीहरु ज्यान जोगाउन श वया त्रा छो डेर भा गे । रामकृष्ण ताम्राकार, सुरेन्द्र चौधरी, महेश आचार्य भने अन्तिम समयसम्म प्रधानमन्त्रीसँगै थिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको मोटरतर्फ हेरे । बु लेटप्रु फ मोटरका सबै सिसा फु टि सकेका थिए, प्रधानमन्त्रीको काख र सिटमा इ टा, ढुं गा, र सि साका टु क्रा देखिए । टाउकोमा हे लमे ट लगाए पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाको ज्यान ख तरा मा थियो । अ रा जक र उ द्दण् ड मानिसहरु फु टेका सिसाबाट ला ठी छिराएर प्रधानमन्त्रीलाई घो च्ने प्रयास गर्दै थिए । त्यही वेला प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षाका हेर्ने जिम्मेवारी पाएका सई महेन्द्र मरासिनीले पहिलो ह वा ई फा यर गरे । त्यसपछि उनले लगातार सात फा यर खो ले । मोटरको अघिल्लो सिटबाट प्रहरी महानिरीक्षक राणा आदेश दिँदै थिए, ‘फा यर फा यर ।’
अनि डीएसपी मिलन बस्नेतले समेत फा यर खोले । स्थिति नि यन्त्र णमा नआएपछि अं गरक्ष क क्याप्टेन सुनील श्रेष्ठ एक हातले प्रधानमन्त्री कोइरालाको कम्मरमा स मा एर जिउको सुरक्षा गर्दै अर्को हातले हवाई फा यर गर्न थाले ।
त्यतिबेला चार तल्ला माथिबाट ढुंगा ख साउ न लागेका एक युवकतर्फ श्रेष्ठको आँखा पुग्यो । चे ताव नी दिँदै श्रेष्ठले रि भ ल्व र देखाए ‘तँलाई उँ डा ई दिऊँ ?’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘गो ली नचलाऊ है । गो ली नचलाऊ ।’ श्रेष्ठले ह वा ई फा यर खोलिरहे । गो लीको आवाजले श व या त्रा र णमै दान जस्तो बन्न पुग्यो । त्यो घ टनाबारे प्रधानमन्त्रीका नि जी सु रक्षाकर्मी महेन्द्र मरासिनीले लेखकलाई सुनाए, ‘स्थिति कति भ या नक भइदियो भने ब ल प्रयोग नगरे उहाँको ज्यान जाने ख त रा आइलाग्यो । कुनै विकल्प नभएपछि बाध्य भएर हामीले फा यर खोलेका हौँ । घटनामा २१ रा उ न्ड ह वा ई फा यर भएको थियो । फा यर खो ल्दासमेत स्थिति नि यन् त्रणमा आएन । सु रक्षाकर्मीहरु भन्न थाले हैन – अब त गो ली पनि स कि यो के गर्ने ?’
प्रधानमन्त्रीको सु रक्षा ख त रा, ज्यानै जा न सक्ने तहमा पुगेको थियो, विष्णुमती पुग्दासम्म । त्यहाँ पुगेपछि चालक विष्णु लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको मो टरलाई सु रक्षि त त वरले बालुवाटार पुयाए । प्रधानमन्त्री कोइरालाले लेखकलाई सुनाएका छन्, ‘जीवनमा धेरैपटक म माथि आ क्रम ण भयो । तर यस प्रकारको ख तर ना क आ क्रम ण कहिल्यै बे हो र्नु परेको थिएन । त्यो आ क्रम ण स्वःस्फूर्त भएको होइन सु नियो जित रुपमा गराइएको हो । त्यो मलाई मा र्ने नै योजना थियो । राजा घोषणा गरिएको तेस्रो दिन दीपेन्द्रको मृ त्युको घोषणा भयो । राजपरिषद्ले २२ गते नै ज्ञानेन्द्रलाई सिं हा सनमा राख्ने निर्णय ग¥यो । नया“ राजाका रुपमा ज्ञानेन्द्रले रा ज्या रो हण गरे । यसरी रो लक्र ममा नरहेका ज्ञानेन्द्र दुईपटक मुलुकको राजा हुन पुगे । विसं २००७ सालमा पिता महेन्द्रभन्दा अघि रा जग द्दीमा बसेका उनी फेरि भतिजा दीपेन्द्रपछि राजा हुन पुगे ।
श्रीहर्षले सुनाए, ‘मैले गिरिजावावुलाई भेट्दासम्म चार दिनको अन्तरमा तीन राजाको नाममा शासन चलिसकेको थियो । सानोबुवा अझै टे न्स न मै हुनुहुन्थ्यो । मैले जोगीसँगको कुराकानी र त्यसपछिका घ टना क्र म सविस्तार सुनाए । उहाले भन्नुभयो, ‘तैले यो कुरा मलाई पहिल्यै किन नभनेको ? मैले भने, ‘त्यति बेला मलाई ड र लाग्यो सानोबुवा तपाइँले श्रीहर्ष ब हुला यो कि क्या हो भन्नुहोला भन्ने । ड रले भन्नै सकिनँ ।’ दरवार ह त्या का ण्डको केही समयपछि कल्याण खत्रीको पनि हृ दय घा तका कारण नि धन भयो । राजारानीको श वया त्रामा प्रधानमन्त्रीमाथि नि यो जित आ क्रम ण भयो । ब ल्ल त ल्ल जो गिए । त्यसको एक महिना केही दिनपछि हो लेरी घ टना मा प्रधानन्त्री कोइरालाले रा जीना मा गर्नु प¥यो र जोगीले भने झैँ त्यो घट ना भएको करिब करिब दश वर्षमै गिरिजाबाबुको नि ध न भयो ।